साहसी भुटानी महिला | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
साहसी भुटानी महिला Home
साहसी भुटानी महिला
By डा. वसन्त पन्त, वरिष्ठ न्युरो सर्जन सन् १९९८ को कुरा हो । करिअरको सुरु–सुरुको बेला । न्युरो सर्जरी वीर अस्पतालमा थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पनि भर्खरै सुरु भएको थियो । यता काठमाण्डौं मोडल अस्पतालमा मैले काम सुरु गरेको थिएँ । अस्पताल अहिलेको जस्तो सुविधासम्पन्न पनि थिएन । मेरो आफ्नै न्युरो सर्जरीको सुरुवाती दिनहरू थिए । मेरा लागि त्यो समयका हरेक सर्जरी परीक्षाजस्ता थिए । धेरै मान्छेले ‘यसले कस्तो अप्रेसन गर्दोरहेछ’ भनेर हेरिरहेको अवस्था पनि थियो । त्यहीक्रममा मोडल अस्पतालमा १८ महिनाको भुटानी शरणार्थीको बच्चा ल्याइयो । जसको टाउकोमा ठूलो ट्युमर थियो । आधाभन्दा धेरै टाउको त ट्युमरले भरिएको थियो । उपचार नै नहोलाजस्तो लाग्ने केस थियो ।
मैले उसको अप्रेसनलाई लिएर दिन–रात अध्ययन गर्न थालेंं, देशी–विदेशी साथीहरूसँग संवाद गर्न थालें । अप्रेसन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अस्पतालमै ठूलो छलफल भयो । पछि अप्रेसन गर्ने नै निष्कर्ष निकालियो । मैले त्यो बच्चाको अप्रेसन करिब १४ घन्टा लगाएर गरें । अप्रेसनक्रममा बच्चाको रगत नै दुईपटक सकिएर दोस्रोेपटक रगत दिनुप¥यो । त्यति गर्दा पनि मैले करिब ७० प्रतिशत ट्युमरभन्दा निकाल्न सकिनँ ।
अप्रेसन सकिएपछि बच्चा उठ्यो । ऊ स्वस्थ नै थियो । म घर आएँ । भोलि बिहानै पाँच बजे बच्चा धेरै रोयो भनेर खबर आयो । म पुगें । बच्चा दूध सर्किएर रुँदै रहेछ । सोहीक्रममा बच्चाको मृत्यु भयो । मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ । म रुन थालें । मलाई हारेको महसुस भयो । करिअरको डर लाग्यो । बजारले अक्षम घोषित गर्ला कि भन्ने डर भयो । केही समय त अब म नेपालबाट भागेर विदेश जान्छु भन्ने सोच पनि आयो । एकाएक म कमजोर भएँ । मलाई त्यहाँ सम्झाउने अरू कोही थिएनन् । उही बच्चाकी आमाले ढाडस दिइन् । ‘डा. साब सानो मन नगर्नुस्, जसको भाग जति हुन्छ त्यति नै हो बाँच्ने हो’ भन्दै ती महिलाले मलाई सम्झाइन् । जसको काखको बच्चा गुमेको छ । उनका लागि आफ्नो बच्चा मलाईभन्दा धेरै महत्वपूर्ण थियो । उनैले सम्झाएपछि ममा एकप्रकारको साहस आयो । ती साहसी भुटानी महिला अहिले कता छिन् थाहा छैन । त्यसपछि मैले हजारौं जटिल शल्यक्रिया गरें । तर, त्यो घटना अझै मेरो स्मृतिबाट पर जान सकेको छैन ।